Monday January 15, 2018 - 00:38:19 in Maqaallo by Halgan News
Waxaana qabaa in doorashda Somaliland ka dhacday ayna ka dhicin dalal badan oo afrika ah oo aqoonsi iyo dhaqaalo badan haysta.
Doorasho kasta oo dhacda si boqolkiiba boqol ahi (100%), calamka melena kama dhacdo. Lakiin sidaynu u yarayn lahayn qaladaadka iyo muranka doorashadu waxay dan u tahay dhamanteen, waxayna soo dhawaynaysaa Ictiraafka muda dheer aynu u dabranahay.
1)Waci galinta cod bixiyayaasha
2)Shaqalaha doorashada goobaha codaynta
Doorashada Madaxtooyada waxaa laga codaynayay 1,642 goobood. Goobkastana waxaa ka hawl galayay ugu yaran 4 shaqalaha doorashada ah ama in ka badan 1,800 shaqalo doorashada oo ka wakiila ah Komishanka Qaranka.
Cabashooyinka aan maqlay waxaa ka mida ah, in shaqalaha doorashadu u badnaayeen dhalinyaro aad u yar-yar, oo jamacada ku jira oo aqoon iyo wayo aragnimo ay shaqadani ku qabtan aan lahayn. Sida daradeed waa in doorashadani ay inoo noqoto cashar aynu ku saxno qaladaadka dhacay.
Qofka shaqalaha doorashada goobaha noqonaya waa inuu noqdo qof hogaamiye ah, sida daradeed waa inuu noqdo qof isagu is diri kara, oo had iyo jeer sugin in wax loo sheego. Waa inuu noqdo qof go’aan qadan kara, oo hogaamiye ah. Goob-kasta oo doorasho ka dhacaysay waxaa jooga afar (4) qof oo komishanka qaranka ka wakil ah, kuwan oo kala ah: Gudoomiye, Gudoomiye ku-xigee iyo Xoog-haye iyo hubiye. Gudoomiye, Gudoomiye ku-xigee waa labada qof ee goobta lagu codaynayo ka masuulka ah, sida daradeed, waa in ay noqdo dad hogaamiyeyaala, oo xali kara arin kasta oo la soo wajahda.
Teeda kale, shaqalaha doorashadu waa in ay wax ka bartaan kuwii ka horeeyay, kagana daydaan hawsha fiican ay qabteen. Caqabadaha kuwii ka horeeyay ka hor yimadan la baro sida lagu xalinayo.
Marka ay doorashadu dhamato waa shaqalaha hawsha si fiican u guta la siiyo Shahado sharaf iyo ‘recommendation letter’ (warqad sharaf). Si marka ay shaqo dawladeed ama shaqo kale doontan shahado sharafta iyo warda sharafta ugu noqoto mid loo tixgaliyo.
Sida daraadeed, muraqibiinta qaar ayaa ku mashquul sanaa telefoonada, oon danaynaynin hawsha loo diray. Dadkeena in badan ayaan waxna qorin waxna akhriyin, oo marka ay codaynayaan u bahan in la cawiyo. Haddaba, marka ay soo galan goobta lagu codaynayo waxay codsadan in loo calamadiyo musharaca ay u-codaynayaan. Gudoomiyaha goobta ee Komishanka Qaranka ka wakiilka ah ayaa u calaamadeeya musharaxa ay rabaan. Sida daradeed, muraaqibka xusbiyadu waa in ay hubiyan inuu u calaamadeeyay musharaxa ay dalbadeen. Haddii aanu muraqibka xusbiga aanu soo jeedin, marka Gudoomiyaha goobta ayaa cida isagu rabo u cod daynaya.
4)Cadaynta Muwadinka (IRIS BIOMETRIC)
i)Haddii, uu qofku soo qato kadhka codaynta, oo qofkale leeyahay (sawirkana isku eeg yihiin), isla markana shaqaalaha goobtu ayna si fiican u hubin.
ii)Ama waa haddii, uu qofku samaysto kadh codaynta oon foorjari ah, sawirkiisa ku dhajiyo. magaca uu doonayo inuu isticmaalana uu yahay qofkale goobta uu doonayo ka diiwan gashan.
Haddaba, dhacda kowada (i) way dhici kartay doorshadii Madaxwaynaha, in kast oo ayna badnayn, xusbina u gaar ahayn. Xalkuna waxaa uu noqonayaa iyada oo shaqalaha goobta lagu codaynayo iyo muraqib xusbiyada si fiican loo tababaro, lana xusho dad soo jeeda oo qofka hubinaya inuu sito Kadh codayna uu isagu leeyahay.
Haddii dhaqaalo loo heli karo waxaa fiican in aynu isticmaalno CCTV (Close Circuit TV) oo ‘wireless’ ah. Qiimahoodu qaali ma ah, meelkastana lama dhigayo ee meelaha dad badani ka codaynayaan ayaa lagu xidhayaa. Qalabkani waxaa lagu hubinayaa in qofka codaynayaa uu sito Kadhka Codaynta oo uu leeyahay, dadka goobta ka shaqaynayaana ay hawshooda qabanayaan. Sideedaba, qofku marka uu ogyahay in video laga duubayo, inuu hawsha sagsago lagama yaabo, qofka codaynayaana lagama yaabo inuu isku dayo inuu ku codeeyo Kadhka aanu lahayn.
5)Hoyga iyo cuntada shaqalaha doorashada (Accommodation)
Haddaba, markaad eegtid shaqada qabtaan maalinta iyo safarka dheer ay soo galan. Waa in la daryeelo mudada ay safarka ku jiran iyo maalinta ay hawsha doorashada socoto.
Gababa gabadii, waxaan marka hore u hanbalyaynayaa Komishanka qaranka Somaliland oo qabtay shaqo aad u fiican, waxaanay inaga mudan yihiin sharaf iyo in la ciseeyo. Waa in aanu ka faa’iidaysano wayo aragnimada ka heleen labadii doorashe eey qabteen. Sida daraadeed, waa in aan la kala dirin. Iyagana waxaan u soo jeedin lahaa in ay ka faa’iidaysanayaaan talooyinka wax ku oolka ah ee loo soo jeediyo. Dhamaanteen waxaa inoo dana in ay doorashooyinku noqdan kuwa xor ah oo xalaala oo aynaa isku qab qabsan.